300 Lakhs and below Properties for Sale in Yangon Region
Price 300 Lakhs and below
Kanbae condo/ တလ ၁၀သိနိး တည်းနဲ့ Fully Furnishied Master bedroom 1 / Single bedroom 1 swimming pool gym အစုံပါသောအခန်းကောင်း
🤩 အတန်တကာ့ အတန်ဆုံး အငှားအခန်းလေးလာပါပြီ 🤩 10သိန်း Mas...
10 Lakh (Kyats)
09421803845 09451056465 09754973965
Ad Number S-10189867
တောင်ဒဂုံ ၊ (26)ရပ်ကွက် (2.99 ဧက) မြေ(ဂရန်) ရောင်းမည်။
Dagon Myothit (South) | Yangon Region
AMS410၊ တောင်ဒဂုံ ၊ (26)ရပ်ကွက် (2.99 ဧက) မြေ(ဂရန်) 1 Sqft- 120000 သိန...
1.20 Lakh (Kyats) (Price Per Sqrt Ft)
095080073, 09422888852, 09422888853, 095080073, 09422888852, 09422888853
Ad Number S-10181310
မြောက်ဒဂုံ၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ (75 x 97) မြေ (ပါမစ်) အရောင်း
မြောက်ဒဂုံ၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ (...
1 Lakh (Kyats) (Price Per Sqrt Ft)
Ad Number S-10181176
🔷 #ဗဟန်းမြို့နယ်မှာ #ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းဖြင့်...
2.20 Lakh (Kyats) (Price Per Sqrt Ft)
Phone No. To Contact Soe Kabar Real Estate Co.,Ltd
Ad Number S-10177563
Soe Kabar Real Estate Co.,Ltd Close
ပေ 100 အင်းယားကန်စပ်ထိ မြေကွက်ကျယ် ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် ရောင်းပါမည်
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ပါရမီလမ်းမအနီး လမ်းကျယ်ပေါ် အင်းယား...
5.50 Lakh (Kyats) (Price Per Sqrt Ft)
Phone No. To Contact Shwe Nann Htike Real Estate Company
095083514, 09777388854, 09777388864
Ad Number S-10170352
Shwe Nann Htike Real Estate Company Close
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပထမထပ္ ေစ်းတန္တိုက္ခန္းအေရာင္း
Dagon Myothit (Seikkan) | Yangon Region
245 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10130824
အရှေ့ဒဂုံ စက်မှုဇုန် နေရာကောင်းရောင်းမည်
Dagon Myothit (East) | Yangon Region
7,500 Lakh (Kyats) (Price Per Acre)
Phone No. To Contact TAW WIN NANN DAW CO.,LTD Real Estate Services
Ad Number S-10191518
TAW WIN NANN DAW CO.,LTD Real Estate Services Close
7မိုင် ၊ ပြည်လမ်းအိမ်ယာ မြေကွက်ရောင်းမည်
3.50 Lakh (Kyats) (Price Per Sqrt Ft)
Ad Number S-10191487
SL20-003039, For Sale Land, ရွမ္းရိပ္သာလမ္း ဆာကူရာေဆးရုံအနီး စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိုးဘြားပိုင္...
Sanchaung | Yangon Region
0.57 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact SONE SEE YAR KO LATT REAL ESTATE
09777779995, 09777770075, 09795409187, 01228860
Ad Number S-10190913
SONE SEE YAR KO LATT REAL ESTATE Close
မြေအကျယ်(25 ဧက)လယ်မြေ ရောင်းမည်။
Hlaingtharya | Yangon Region
1,400 Lakh (Kyats) (Price Per Acre)
Phone No. To Contact Koe Kant Hwar Kway Real Estate
095054804, 095063659, 09250208887
Ad Number S-10190521
Koe Kant Hwar Kway Real Estate Close
မြေအကျယ် 2•5 ဧက ဥယျာဉ်ခြံမြေ ရောင်းမည်။
3,000 Lakh (Kyats) (Price Per Acre)
Ad Number S-10190501
မြေအကျယ်10 ဧက ရန်ကုန်ပုသိမ်လမ်းမပေါ်တွင်ရောင်းမည်
4,000 Lakh (Kyats) (Price Per Acre)
Ad Number S-10190463
မြေအကျယ် (6ဧက) ရန်ကုန်ပုသိမ်လမ်းမပေါ်တွင်ရောင်းမည်
2,000 Lakh (Kyats) (Price Per Acre)
Ad Number S-10190440
မြေအကျယ်(37 ဧက )ရန်ကုန်ပုသိမ်လမ်းမပေါ်တွင်ရောင်းမည်
1,750 Lakh (Kyats) (Price Per Acre)
Ad Number S-10190418
မြေအကျယ် (120 ဧက ) ရန်ကုန်ပုသိမ်လမ်းမပေါ်တွင်ရောင်းမည်
750 Lakh (Kyats) (Price Per Acre)
Ad Number S-10190402